Kana iwe uine miti mishoma pamba pako, saka dzimwe nguva unozoda cheni saha. Kunyangwe iri nekuda kwekuti dutu rarova pasi mamwe matavi, kana iwe uchida kudzikisa kukura kwemiti kuitira kuti mwenje wezuva upinde mugadheni rako, ruoko rwakaona runobatsira zvikuru.
Vazhinji varidzi vedzimba havadi yepakati kana inorema modhi, asi izvo hazvireve kuti iwe unofanirwa kusarudza chero saw. Sezvo iwe uchifanira kupira saizi, tsvaga yakanakisa diki cheni yechaizi inokodzera zvaunoda. Izvi zvinogona kureva kutenga peturu kana bhatiri rine simba sosi, kana kunyangwe wired saw.
Kunyangwe hombe cheni yakanakira iwe neyadhi yako zvinoenderana nekuti unoronga kuishandisa sei uye nekukura kweimba yako. Kana chinangwa chako chiri kutema huni, cheni yakakura uye ine simba inozokodzera basa iri. Kana iwe uine miti mikuru muyadhi yako, unogona kuona kuti kutemwa neketani reza reji isingasviki makumi maviri masendimita idambudziko rakakura.
Kana tsangadzi yako iri diki uye chirongwa chako chiri chekudikanwa chete, saka ketani diki inokwana. Inotema nyore matavi akadonha kana kubvisa mamwe makwenzi akasindimara pasina matambudziko. Pane zvimwe zvinhu zvinofanirwa kufunga nezvazvo.
Usati wafunga nezve diki ketani inosangana nezvido zvako, iwe unofanirwa kunzwisisa musiyano uripakati pemaitiro akati wandei. Izvo zvinosanganisira gasi inofambiswa, bhatiri inowaniswa uye wired mamodheru. Imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipira, asi muzvikamu zvitatu izvi, iwe unowana mamwe akanakisa macheni macheni anosangana nezvido zvako.
Bhatiri-inofambiswa ngetani dzemaketani dzine mukana wekuchinja. Ivo vakaita sekuchengetedza kwakaderera seyakajairika magetsi cheni saha, asi ivo vanopa kutakura kweye pneumatic saw. Sarudzo dzanhasi zvakare dzine simba kwazvo uye panguva imwechete dzisina ruzha kupfuura enzaniso peturu dhiraivha mamodheru. Izvo zvisina kunaka ndezvekuti mabhatiri eaya macheni macheni anodhura, saka mutengo wemabhatiri ari paruoko unogona kunge wakakwira sechaini yacho pachayo.
Bhatiri macheka akakosha kune varidzi vedzimba vane zvimwe zvinhu asi vanongoda kushandisa saga pano neapo. Izvo zvidiki zvekuchengetedza zvinodiwa uye kutakurika zvinoita kuti dzive akanakisa madiki macheni macheni mune aya mamiriro.
Wired chainsaws anga aripo kwenguva yakareba, zvinoreva kuti pane zvakawanda zvakanaka sarudzo pamusika. Pamusoro pekuchenesa nekukurumidza uye nekuchengetedza huwandu hwemafuta, zvinoda zvishoma kugadziriswa. Mazhinji masaha ematare akafananidzwa musimba nemasaha epeturu.
Dambudziko necheni yewatchsaw ndeyekuti iwe unogona kungoitakura chete newe. Iwe unogara uchida tambo yekuwedzera paruoko, izvo zvinoita kuti aya mamodheru akanakire kumayadhi madiki asingade kushandiswa kwakawanda kwemaketani. Nekudaro, sekureba sekunge iwe uine sosi sosi, ivo vanogona kuita rakawanda rebasa remhepo saw.
Vazhinji vanhu vanofunga nezve pneumatic saws pavanotsanangura magetsi emagetsi. Kana ikachengetedzwa nemazvo, aya muchina ane ruzha, uye dzimwe nguva anoputa anogona kubvarurwa kubva pahuni pasina matambudziko.
Peturu inofambiswa neketani inoda kuwanda kugadziridzwa kupfuura macheni emagetsi. Mushandisi anoda kuchengetedza yakachena mweya firita, shandisa musanganiswa wakakodzera wepeturu uye mafuta einjini, uye kutsiva plug plug. Ivo zvakare vaporized uye vanoda kugadziridzwa kune mafuta uye mweya musanganiswa. Naizvozvo, macheni ane peturu-anofambiswa anogona kunge akasarudzika.
Nekudaro, kana iwe uine imba hombe kana kuronga kushandisa ketani kazhinji, iyo peturu-inofambiswa modhi inogona kunge iri yakanakisa diki ketani yezvaunoda.
Chainsaw nyanzvi dzinoziva maturusi aya kubva mukati nekunze, asi izvi hazvireve kuti munhu wese ane ruzivo rwakafanana. Kana usiri nyanzvi yehuni, usati watanga kutenga, ndapota funga zvinotevera zvakakosha. Kuchengeta aya mapoinzi mupfungwa kuchakubatsira iwe kuona yakanakisa diki cheni yechafa yako.
Kana usati wamboshandisa chainsaw pamberi, kana wave kwekanguva, iwe unofanirwa kunzwisisa njodzi dzezvikwereti.
Kana chikamu chepamusoro chemucheto wetsvimbo yesimbi chikasangana nehuni hwakasimba, rebound inoitika. Kana mushandi wemasaha asina ruzivo kana asingatarisiri, jeko resaha rinodzosera kumashure ndokukuvadza zvakanyanya.
Kunyangwe kucheka mhino yedanda muhuni iri nzira inozivikanwa, ihwo hunyanzvi kune vane huni vane ruzivo. Kunze kwekunge iwe uine makore eruzivo nemaketani, iwe unofanirwa kufunga nezvekusiya chifukidziro chekudzivirira kumagumo kwebhawa. Iwe unofanirwa zvakare kumhanyisa yakaderera rebheni cheni pane saha. Izvo zvakakoshawo kugara uchicheka pasaha nemaoko maviri.
Saizi yemagetsi saw (yemagetsi modhi) kana injini (yemhepo saw) inoenderana nebasa rayo. Iyo inogona zvakare kusarudza kana iwe uchigona kukwidziridza kune yakareba bar, kana iwe unogona kufunga nezve inorema mutoro wesaha.
Kune akawanda madiki peturu anofambisa macheni machena, saizi yeinjini iri pakati pe30cc ne40cc-inogamuchirwa saizi injini, inokodzera chero chinhu kubva pa10-inch kana 12-inch tsvimbo kune 16-inch tsvimbo. Tsvimbo yemasendimita gumi nemasere inogona kushandiswa, asi iyi renji inofanira kunge yakakura sesaha mune ino nhanho. Kufananidza matanda aya neiyi injini saizi zvinopa simba rakaringana uye torque pasina kukuita dzungu pamuti muhombe.
Kune chainsaws, iyo amperage inofanirwa kutariswa. Iyo ampere chiyero chemagetsi emagetsi inotsanangura simba raanogona kubata pamberi penzvimbo dzemukati dzisati dzatanga kudonha. Saha ine ratidziro yazvino ye14 amps inokodzera kwazvo dzimba zhinji.
Kureba kwebara rakawona kunogadza iro rakakodzera mhando rebasa, asi pane zvimwe zvinhu zvekuziva. Marefu matanda (makumi maviri nemana masendimita kana kureba) angaite kunge anotyisa, asi ari nyore chaizvo kudzora. Saha yepamusoro ine shaft ipfupi (kazhinji masendimita gumi) idiki kwazvo uye inoita kunge inosvikika. Zvisinei, zvinogona kunge zvisingatarisirwi uye zvine njodzi kumasaha matsva. Izvo zvakanaka pakukwira kwemiti arboriculture.
Mabhendi ebhendi ane gumi nemasere kusvika gumi nemasere pakureba akakosha pakati nepakati uye anokwanisa kubata mhando zhinji yemuridzi wemba. Vanogona kutema miti midiki, kutema matavi makuru, uye kutema huni pasina matambudziko akakura. Kana iwe uchida kuzvitsiva, izvi zvipenga zvakareruka kuwana.
Zvichienderana nesimba rako remuviri, huremu hunogona kuve hunonyanya kukosha. Kana iyo saha yakanyanya kurema kuti ishande zvakachengeteka, sosi yemafuta kana kureba kwetanda hazvina basa zvachose.
Wired chainsaws uye bhatiri saws anowanzo ari akareruka macheni machena aunogona kutenga. Ivo havadi tangi repeturu rizere nemafuta, uye mota dzavo dzemagetsi idiki, saka dzakareruka uye dziri nyore kushandisa mune akasiyana mamiriro.
Asi ramba uchifunga kuti saha inogona zvakare kuve yakareruka. Kana iko kudzoka kukasangana, iyo yepamusoro saha ine simba rakakwira, pfupi tsvimbo uye mwenje mota haishande sezvaitarisirwa. Iyo inertia yakawedzera yemota inorema ichabatsira kudzikisira mhedzisiro ye kickback.
Kana iwe uchida kuchengetedza hukama hunofadza nevavakidzani vako, iwe unofanirwa kufunga nezve ruzha rwakadii runoitwa neketani. Mhepo inoona masaisa inogona kuvhara matsi, ichigadzira kutema huni nzira yakanakisa yekuita zviitiko zvemasikati, apo vanhu vashoma vakarara.
Kunyangwe mamwe emagetsi nemabhatiri-anofambiswa sarudzo ane ruzha. Ruzha rune hasha kubva kumagetsi emagetsi pamwe chete neruzha rwunoitwa kana cheni ichidambura pahuni, ichigadzira kuzungunuka.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuziva nezve ruzha ndechekuti iwe unofanirwa kugara uchipfeka kudzivirira kunzwa. Kune akawanda muff vadziviriri mune yako yemuno chitoro chemhuri, uye ivo vanozokubatsira iwe kuchengetedza nzeve dzako zvakanyanya mushure mekupedza kushandisa iyo chainsaw kwezuva.
Chainsaw inogona kuva nenjodzi; hapana kuramba izvozvo. Masaha mazhinji ikozvino ane maficha anogona kukubatsira iwe kuona kuchengetedzeka. Kunyanya kukosha, iwe unofanirwa kutsvaga ketani saha ine inertial cheni brake. Aya mabhureki ebhureki anogona kuona shanduko nekukurumidza muinertia inokonzerwa nekudzosera shure nekukiya cheni kuti imise. Kana iwe ukasangana nekickback, iyo bhureki ichaita uye inobatsira kuona kuchengetedzeka kwako.
Zvakare, macheya mazhinji evaridzi vedzimba iye zvino agadzirirwa nemaketani akadzikira, ayo anoita basa rakakura mukuderedza kudzikisira mhedzisiro. Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kupfeka yakakodzera yekudzivirira michina, kusanganisira saha musoro, mabhoti akasimba, ziso nenzeve kudzivirira, uye akakodzera maviri magirovhosi ebasa.
Iye zvino zvaunenge uine ruzivo rwemashure pane zvaunotarisa kana uchitenga yakanakisa cheni diki yeimba yako, iri gwaro rinokubatsira iwe kuwana dzimwe sarudzo hombe. Paunenge uchisarudza aya mazano, chengetedza izvo zvakakosha zvekufunga uye zvakakosha mabasa mupfungwa, saka zvinoshanda.
Iyo Husqvarna 135 Maka II peturu cheni saha ine mabasa anodikanwa. Rinenge rakareruka kunge cheni yemagetsi, asi rine simba reinjini ine gasi ine simba. Uye zvakare, Husqvarna's X-Torq mafuta manejimendi sisitimu inogona kuvandudza hunyanzvi hwemafuta uye kudzikisa peturu, izvo zvinoita kuti ive inoshamwaridzika nharaunda sezvinoita peturu-inemagetsi yemiti inowaya.
Kana yako diki pfuma inoda mamwe akareruka macheni machena, saka WORX 14.5 Amp 16-inch wired yemagetsi cheni macheki akakosha kune akaomesesa mabhajeti. Saha ine 14.5 amp mota uye 16-inch tsvimbo, zvinoreva kuti inogona kutema miti midiki uye inokodzera kwazvo kutema huni. Iyo ine otomatiki lubricator uye windows yekuchengetedza hwindo, ichigadzira tsvimbo lubrication iri nyore maitiro. Iyo ine yakaderera kudzora cheni uye cheni yakaputsa kubatsira kubatsira kudzikisa mukana wetsaona. Iyo zvakare inoshandisa otomatiki kunetsa sisitimu, zvinoreva kuti shoma basa revashandisi uye inowedzera hupenyu hwecheni neketani.
Kana usiri mushandisi wenguva dzose wecheni, unogona kusaziva kuti musana wako unorwadza zvakadii mushure mezuva rese rekucheka cheni. BASA rinobatsira kudzikisira dambudziko iri uye rinorema anopfuura mapaundi matanhatu chete. Iyi 10-inch saw inoshandisa 20V bhatiri (isina kubatanidzwa) kumhanyisa ketani nekumhanya kunosvika pamamita gumi nemashanu pasekondi, izvo zvinokwana kumabasa mazhinji evaridzi vedzimba. Iyo kifaa inoshandisa otomatiki oiler kuchengetedza ketani uye giredhi ndiro kutonhorera, uye WORX's otomatiki tensioning sisitimu yekuwedzera hupenyu hwecheni uye mutungamiriri ndiro.
Bhatiri-inofambiswa ngetani macheni akauya kure, uye Makita ndiye mambo we pyre. Iyi 14-inch bar cheni yakaona ine mbiri yechaja uye ina 5.0AH mabhatiri nekuti saha inoshandisa mabhatiri maviri panguva. Brush isina mota inogona kuburitsa yakawanda simba uku ichiwedzera hupenyu hwebhatiri. Makita akataura kuti XCU03PT1 ine simba kunge injini ye32cc peturu. Izvi zvinoita kuti ikwanise kutema miti midiki uye kutema huni dzakawandisa senge oak nemaple. Iko kugadzirisa kwecheni hakudi maturusi, uye mushandisi anongotenderedza pfundo padivi resaha kuti awane kunetseka kwaunoda. Iyo zvakare ine auto-fueler uye hwindo rekuona kuti une mafuta akakwana eprojekti.
Hapana kunakidzwa nekucheka huni nesadza risina kujeka. Oregon ndeimwe yevanogadzira epamusoro emakona emaketani munyika. Vakagadzira yavo yekuzvirodza-cheni ine simba rine simba. Iyo CS1400 ine 16-inch tsvimbo uye otomatiki inorodza tsvimbo iyo inogona kukuya iwo matsva micheto pamazino ekucheka kweketani mumasekondi matatu kusvika mashanu. Iyo ine 15-amp yemagetsi mota, yekuzvigadzira lubricator uye iyo tangi yemafuta yekutarisa hwindo rekuzora tsvimbo. Iyo zvakare inoshandisa chishina-chisina tambo tensioning system iyo inobvumidza vashandisi kugadzirisa cheni kune chaiyo kukakavara uye nyore kuiisazve iyo munzvimbo. Chimwe chezvakanakisa maficha eichi saw kunyarara kwayo panguva yekushanda, asi ichine simba rakaringana rekuita kuti basa riitwe.
Kune zvakawanda zvakanakira kuve necheni cheni. Kuchengetedza kwakachengeteka, kurerukirwa kwekushandisa uye kugona kuita zvese zvinobatsira.
Izvo zviri nyore kwazvo chengetera diki ketani mugaraji kana musangano uchienzaniswa neyakakura yemuviri modhi. Sarudzo dziri mune urwu runyorwa dzinogona kuiswa pasherufu, pasi pebhenji rebasa, kana chero kupi kune nzvimbo. Maketani makuru akakurisa kuisa uye anogona kunge akaremerwa kune mamwe maraki.
Kazhinji, masaisai madiki ari nyore kushandisa, sezvo mazhinji ari mamero evaridzi vedzimba. Aya masaha ane simba rine simba uye maficha ekuchengetedza, asi zvakare akareruka kupfuura masaha makuru. Chaizvoizvo, iwe unogona kushandisa saha kune chero chirongwa chinowanikwa mune chaihwo hupenyu hwomuridzi wemba. Uye zvakare, iwe unogona kukwereta nyanzvi pasina kufona kana kubhadhara.
Kazhinji zvinowedzera mari kuva neketani kadiki pane cheni hombe nekuti kazhinji dzinenge dzakachipa. Sezvo mazhinji ari emagetsi kana bhatiri emagetsi, mari dzekuchengetedza dzakadererawo. Cheni yakapfava kukuya uye bhodhoro remafuta rinochengeta saga yako ichimhanya kwemakore mazhinji.
Unogona kufunga nezvechainhaona izvozvi, izvo zvakanaka. Asi usati waisa saha mungoro yekutengera, ungangoda kupindura mimwe mibvunzo. Heano mamwe emibvunzo inowanzo bvunzwa nezve yakanakisa diki chainsaw.
Kurema kweketani diki kuri pakati pemapaundi matanhatu nemakumi maviri. Zvinoenderana nesimba rayo rinobva, mabhatiri mangani aanoshandisa, uye zvivakwa zvawo.
Greenworks inogadzira diki cheni saha. DEWALT zvakare inopa yakasarudzika sarudzo kune diki bhatiri simba iro vazhinji varidzi vedzimba vanosarudza.
Pane zvinhu zvakawanda, asi iwe unogona kushandisa diki ketani kutema huni senge paini, musidhari, birch, uye oak.